Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): November 2011
China pushes Burma military ties ahead of Clinton visit
(Reuters) - Chinese Vice President Xi Jinping offered to boost military ties with Burma on Monday, days ahead of U.S. Secretary of State Hillary Clinton's historic visit to China's isolated southern neighbor that has begun showing signs of political reform.
27 November 2011 | Bangkok Post | Newspaper section: Spectrum
While the international community and Asean reward Burma's government for its cautious reforms, the army is looting, burning and destroying village farms and forcing thousands of Kachin civilians into makeshift camps.
A BURMESE PERSPECTIVE: An Analysis of President Obama's Speech in the New Cold War
By Kanbawza Win | 26 November 2011
The rise of China in every respect in today’s geopolitical situation has createdanew bipolar world compounded by the fact that in 2000 years China, for the first time has access to the Indian via Burma due to the Burmese Junta’s survival tactics, seems that Burma will be one of the hot spots in the new impending Cold War. Admittedly neither China nor US has any real desire fora‘New Cold War’ to start, but deep suspicion and an unwillingness to break the mould of relations are leading to the emergence of these increasingly robust hedges and weakening of moderate forces on both sides. Until now, neither the US nor China has been fully prepared to face up to the underlying divisions because they imply some difficult choices. The corporate and economics still sees China asamajor new commercial opportunity, while still far short of the power to represent any sort ofachallenge to the world order.
ကိုဝိုင်း | အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့များကို အစိုးရက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းမှုမရှိကြသေးဟု အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
By ခင်ဦးသာ | 18 နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ | ဧရာဝတီ
Bali, Indonesia (CNN) -- U.S. Secretary of State Hillary Clinton plans to visit Myanmar next month onatrip that could signalamajor change in relations between the two countries.
18 November 2011 | BBC
သတ္တုတူးဖေါ်လိုသူများအတွက် ပတ္တမြားနဂါးဖေါင်ဒေးရှင်း ငွေထုတ်ချေးမည်
November 17, 2011 | DVB
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ သတ္တုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသေူတွေနဲ့ အရင်းအနှီးမဲ့ လက်လုပ်လက်စားတိုရဲ့ ဘ၀မြှင့်တင်ဖို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် လွတ်တော်အမတ် ဦးနေ၀င်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့ ပတ္တမြားနဂါးဖေါင်ဒေးရှင်းက ငွေတွေထုတ်ချေးပေးတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်) | အင်္ဂါနေ့, 15 နိုဝင်ဘာလ 2011
ကရင်နီပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ ထီးဖိုးကလိုးကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွာသားများသည် မိမိတို့ သောက်သုံးရေများကို ရွာပြင်ဘက်သို့ နွားလှည်းများဖြင့် သွားရောက်သယ်ယူကြရသည်။ ရေချိုးလိုပါက နာရီဝက်ခန့် ရှိသည့် အဆိုပါ ရေထွက်ပေါက်နှင့် ရေအိုင်များ ရှိရာသို့ ခြေလျင်ဖြင့် သွားရောက်၍ အသုံးပြုကြသည်။
By ဗီအိုအေ (မြန်မာဌာန) | အင်္ဂါ, 15 နိုဝင်ဘာ 2011
မြန်မာအစိုးရက ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ကိစ္စကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက သဘောတူ ထောက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။
ချင်းမိုင်မြို့ နောင်ခမ်းကျောင်း ပအိုဝ်းဆရာတော် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပနအခမ်းအနား ကျင်းပမည်
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (ပအိုဝ်း) ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသ
Monday, 14 November 14, 2011 | သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ ချန့်မွယ့်အုပ်စုရှိ နောင်ခမ်းကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (ပအိုဝ်း) ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသ ပျံလွန်တော်မူခြင်း ရက် ၁၀၀ ပြည့်သည့်အလျောက် အန္တိမ အဂ္ဂိဈာပနပူဇော်ပွဲကို ယခုလ နောက်ဆုံးအပတ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘုရားသုံးဆူရှိ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များ လက်နက်ချရန် တောင်းဆိုခံရ
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသော တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ)တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လက်နက်အပ်နှံရန် အစိုးရစစ်တပ်၏ တောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု ဒီကေဘီအေဘက်က ပြောသည်။
By DVB | 11 November 2011
Burmese troops burned down around 50 homes inavillage in eastern Kachin state two days ago as they prepare for an offensive against the Kachin Independence Army (KIA), despite assertions from fleeing residents that no rebels inhabit the village.
ယခုနှစ် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် လောင်းကစားဝိုင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်
Tuesday, 08 November 2011 | သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်မြို့တော် တောင်ကြီး၌ နှစ်စဉ်
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်အတွင်း ၂၀၀၈ ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်စွာ လောင်းကစားဝိုင်းများ
Large gecko sold in Burmese village for USD $2 million
The large Burmese gecko that was bought
byaChinese trader for about USD $2 million
to be used in the preparation of traditional
medicines. Photo: 7-Day News Journal
Tuesday, 08 November 2011 | Mizzima News
Rangoon (Mizzima) – A3and ½ foot long gecko was sold for 1.7 billion kyat (about USD $2 million) at Kyaukse Village in Sagaing Region on October 30, according to 7-Day News Journal.
Chinese traders reportedly bought it to use its regurgitation fluids in makingatraditional medicine.
Originally,aMandalay-based trader offered to buy the gecko at the price of 1 billion kyat,agecko trader in Mandalay Region said.
By featured, ရန်ပိုင် on November 8, 2011 | ဧရာဝတီ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်ရှိ တောင်သူ ၂၀၀ ခန့်က ၎င်းတို့ပိုင် မြေဧက ၁၀၀၀ ကျော်ကို စစ်တပ်က သိမ်းယူထား သည့်အတွက် ဖြေရှင်းပေးရန်ယမန်နေ့ နံနက်က ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်တောင်းဆိုကြောင်း သိရသည်။
Wednesday, 02 November 2011 | Mizzima News
(Editorial) – The time has come for the National League for Democracy (NLD) to decide whether it should register asalegal political party under the Union Election Commission.